Orinasa fitoeran-tsakafo fitaratra | Mpanamboatra fitoeran-tsakafo fitaratra any Sina, mpamatsy
Kaontenera fitahirizana vera 360ml LJ-0655
LONGSTAR fitaratra sakafo toradroa fitaratra, vita amin'ny sakafo avo lenta fitaovana, azo antoka sy salama, koa mora ny manadio azy. Mety hafanaina ao anaty lafaoro misy microwave izy io, azo ampiasaina ao anaty lafaoro koa; Izy io dia misy tery tsara, peratra famehezana amin'ny sisiny efatra voaisy tombo-kase tsara.
Kaontenera fitahirizana vera 550ml LJ-0656
Kaontenera fitahirizana vera 700ml LJ-0657
Fitoeran-tsakafo boribory vera 420ml LJ-0658
Fitoeran-tsakafo boribory LONGSTAR, vita amin'ny akora sakafo avo lenta, azo antoka sy mahasalama izy io, mora koa ny manadio azy. Mety hafanaina ao anaty lafaoro misy microwave izy io, azo ampiasaina ao anaty lafaoro koa; Izy io dia misy tery tsara, peratra famehezana amin'ny sisiny efatra voaisy tombo-kase tsara.
Fitoeran'ny sakafo boribory fitaratra 800ml LJ-0659
Fitoeran'ny sakafo boribory fitaratra 950ml LJ-1039
Fitoeran'ny sakafo boribory fitaratra 620ml LJ-1040
Kaontenera manodidina ny vera 400ml LJ-1041
Kaontenera fitahirizana vera 330ml LJ-0650
Fitoeran'ny sakafo mahitsizoro fitaratra LONGSTAR, vita amin'ny akora sakafo avo lenta, azo antoka sy mahasalama izy io, mora koa ny manadio azy. Mety hafanaina ao anaty lafaoro misy microwave izy io, azo ampiasaina ao anaty lafaoro koa; Izy io dia misy tery tsara, peratra famehezana amin'ny sisiny efatra voaisy tombo-kase tsara.
Kaontenera mahitsizoro fitaratra 550ml LJ-0651
Kaontenera fitahirizana vera 360ml LJ-1038
Kaontenera fitahirizana vera 550ml LJ-1037